November 2021 - Page2of 56 - ShwengweGames
သူငယ်ချင်း ပြေတီဦးရဲ့မွေးနေ့မှာ သတိတရနှင့် အလိုအပ်ဆုံးအရာလေးနှင့် မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ဇွဲနိုင်ဝင်း
November 30, 2021 by Shwengwe Games
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇွဲနိုင်ဝင်းကတော့အနုပညာခြေလှမ်းတွေကျဲပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေကအခိုင်အမာအားပေးဝန်းရံလျက်ရှိဆဲပါပဲနော်။ အနုပညာမျိုးရိုးရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကတော့ သဘာဝမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ဇွဲနိုင်ဝင်းကို သတိတရနဲ့အားပေးနေကြဆဲပါပဲနော်။
ဒီနေ့မှာတော့ နိုင်ငံကျော်ပြည်သူချစ်အနူပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ပြေတီဦးရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြေတီဦးဟာမွေးနေ့မွေးနေ့မှာ ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေမိသားစုတွေနဲ့ အတူတူရှိမနေနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေမိတ်ဆွေတွေကတော့ မွေးနေ့တုမွန်ကောင်းတွေကိုမနေ့မလျော့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပြီး ဆုတောင်းပေးခဲ့သူတွေထဲမှာ ဇွဲနိုင်ဝင်းလည်းအပါအဝင်ပါပဲနော်။
“HAPPY BIRTHDAY ပါ ချစ်သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းရဲ့ မိသားစု တွေ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဆုံဆည်းနိုင်ပါစေ 🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ အတူ အမှတ်တရ အတူနူရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကိူတင်လာခဲ့တာပါ။ပရိသတ်တွေလည်း ပြေတီဦးအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Source – ZweNaing Win
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဇြဲႏိုင္ဝင္းကေတာ့အႏုပညာေျခလွမ္းေတြက်ဲေပမယ့္လည္း ပရိသတ္ေတြကအခိုင္အမာအားေပးဝန္းရံလ်က္႐ွိဆဲပါပဲေနာ္။ အႏုပညာမ်ိဳး႐ိုး႐ွိတဲ့သူျဖစ္ၿပီးပရိသတ္ေတြကေတာ့ သဘာဝမင္းသားတစ္လက္ျဖစ္တဲ့ဇြဲႏိုင္ဝင္းကို သတိတရနဲ႔အားေပးေနၾကဆဲပါပဲေနာ္။
ဒီေန႔မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္ျပည္သူခ်စ္အႏူပညာ႐ွင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ေျပတီဦးရဲ႕ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။အခုဆိုရင္ေျပတီဦးဟာေမြးေန႔ေမြးေန႔မွာ ခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြမိသားစုေတြနဲ႔ အတူတူ႐ွိမေနႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြမိတ္ေဆြေတြကေတာ့ ေမြးေန႔တုမြန္ေကာင္းေတြကိုမေန႔မေလ်ာ့ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ၿပီး ဆုေတာင္းေပးခဲ့သူေတြထဲမွာ ဇြဲႏိုင္ဝင္းလည္းအပါအဝင္ပါပဲေနာ္။
“HAPPY BIRTHDAY ပါ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္းသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ မိသားစု ေတြ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာနဲ႔ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ဆုံဆည္းႏိုင္ပါေစ 🙏”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ အတူ အမွတ္တရ အတူႏူ႐ိုက္ခဲ့တဲ့ပုံေလးေတြကိူတင္လာခဲ့တာပါ။ပရိသတ္ေတြလည္း ေျပတီဦးအတြက္ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
”လူကိုလူလို့ မထင်ဘဲ နှိပ်စက်တတ်တဲ့လူတွေနဲ့ အသက်၂၀ ကျော်တဲ့ အထိကြုံတွေ့ ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ အောင်လေး ”
”လူကိုလူလို့ မထင်ဘဲ နှိပ်စက်တတ်တဲ့လူတွေနဲ့ အသက်၂၀ ကျော်တဲ့ အထိကြုံတွေ့ ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောလာတဲ့အောင်လေး ”
ပရိသတ်ကြီးရေ ​အောင်လေးကတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းစွဲကြိုက်ကြတဲ့ မော်ဒယ်လ်မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောမောသန့်ပြန့်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ ထိုင်းမင်းသားတစ်ဦးလားလို့တောင်အထင်မှားရလောက်တဲ့ တကယ့်ကို ချောလွန်းတဲ့မင်းသားတွေထဲကတစ်လက်ပါနော်။
သရုပ်ဆောင်ရာမှာလည်းပီပြင်ကာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်​တဲ့တက်သစ်စမင်းသားတွေထဲက အလားအလာရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုလည်းမှားနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး ။အမြဲသူ့ရဲ့ပရိသတ် Fanတွေအပေါ်မှာလည်း ပွင့်လင်းဖော်ရွေကာ ပရိသတ်တွေအတွက်သူ့ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဖော်ပြလေ့ရှိသူပါ။
လက်ရှိိမှာတော့”ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တည်းက စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တာအဲတာပဲ လူကိုလူလို့မထင်ပဲနှိပ်စက်တဲ့လူတွေနဲ့အသက်၂၀ ကျော်တဲ့ထိ ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်မသေရုံ့တမယ်ပဲ မိသားစုညီကိုမောင်နှမဆိုတာဘာမှန်းမသိခဲ့ရဘူးကြီးတဲ့ထိ သူများတွေကိုအရမ်းအားကြခဲ့ရတယ်စိတ်နာတယိ သေတဲ့ထိမမေ့ဘူး ။
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မေတ္တာထားခဲ့ပေးခဲ့အားလုံးပေါ် ခုထိလည်းအကောင်းဆုံးပြန်ပေးဆပ်ခဲ့ပေးတဲ့အတွက်လိပ်ပြာလုံတယ်ကလဲ့စားဆိုတာလည်းမချေခဲ့မိဘူး တစ်နေ့ပြန်မခံစားရပါစေနဲ့”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကိုဖွင့်ဟခဲ့တာပါ။ပရိသတ်တွေထဲမှာရော အောင်လေးနးလိုငယ်ဘဝကိုခံစားကာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတူတွေရှိရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Credit – CeleGabar
” လူကိုလူလို႔ မထင္ဘဲ ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့လူေတြနဲ႕ အသက္၂၀ ေက်ာ္တဲ့ အထိ ႀကဳံေတြ႕ ခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာလာတဲ့ ေအာင္ေလး ”
ပရိသတ္ႀကီးေရ ​ေအာင္ေလးကေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြအသည္းစြဲႀကိဳက္ၾကတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္မင္းသားတစ္လက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ေခ်ာေမာသန့္ျပန့္တဲ့႐ုပ္ရည္နဲ႕ ထိုင္းမင္းသားတစ္ဦးလားလို႔ေတာင္အထင္မွားရေလာက္တဲ့ တကယ့္ကို ေခ်ာလြန္းတဲ့မင္းသားေတြထဲကတစ္လက္ပါေနာ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ရာမွာလည္းပီျပင္ကာ က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကိုပီျပင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္​တဲ့တက္သစ္စမင္းသားေတြထဲက အလားအလာရွိတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဆိုလည္းမွားနိုင္မယ္မထင္ပါဘူး ။ အၿမဲသူ႕ရဲ႕ပရိသတ္ Fanေတြအေပၚမွာလည္း ပြင့္လင္းေဖာ္ေ႐ြကာ ပရိသတ္ေတြအတြက္သူ႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္နဲ႕ လႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္ေတြကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေနေဖာ္ျပေလ့ရွိသူပါ။
လက္ရွိိမွာေတာ့”ကြၽန္ေတာ္ ငယ္ငယ္တည္းက စိတ္ဒဏ္ရာရခဲ့တာအဲတာပဲ လူကိုလူလို႔မထင္ပဲႏွိပ္စက္တဲ့လူေတြနဲ႕အသက္၂၀ ေက်ာ္တဲ့ထိ ႀကီးျပင္းခဲ့ရတယ္မေသ႐ုံ႕တမယ္ပဲ မိသားစုညီကိုေမာင္ႏွမဆိုတာဘာမွန္းမသိခဲ့ရဘူးႀကီးတဲ့ထိ သူမ်ားေတြကိုအရမ္းအားၾကခဲ့ရတယ္စိတ္နာတယိ ေသတဲ့ထိမေမ့ဘူး ။
ဒါေပမယ့္ကြၽန္ေတာ္ေမတၱာထားခဲ့ေပးခဲ့အားလုံးေပၚ ခုထိလည္းအေကာင္းဆုံးျပန္ေပးဆပ္ခဲ့ေပးတဲ့အတြက္လိပ္ျပာလုံတယ္ကလဲ့စားဆိုတာလည္းမေခ်ခဲ့မိဘူး တစ္ေန႕ျပန္မခံစားရပါေစနဲ႕”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႕သူ႕ရဲ႕စိတ္ဒဏ္ရာကိုဖြင့္ဟခဲ့တာပါ။ပရိသတ္ေတြထဲမွာေရာ ေအာင္ေလးနးလိုငယ္ဘဝကိုခံစားကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ဘဝတူေတြရွိရင္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
”ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ တရားကျစရာ လူ့တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဖွင့်ပြောလာတဲ့ ချောရတနာ”
ပရိသတ်ကြီးရေ ချောရတနာကတော့ ကာရာအိုကေ ခေတ်ထဲက တေးစီးရီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေသတိထားမိလာပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် ချောမောလှပတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး တစ်သားမွေးတစ်သွေးလှတယ်လို့ဆိုရလောက်အောင်နုပျိုလှပနေတဲ့သူပါ။
ဇာတ်ဆောင်ကာရိုက်တာတွေမှာသာမက ဇာတ်ပို့နေရာတွေမှာလည်း ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်တတတ်တဲ့သူမကတော့ ” ဥ ” ဇာတ်ကားမှာ စိတ်မနှံ့တဲ့ ဇာတ်ပို့နေရာကနေ အကယ်ဒမီဆုကို ထိုက်ထိုက် တန်တန် ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လတ်တ လောမှာလည်းသူမအနေနဲ့ Live sale လေးတွေ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေတာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့” တချို့ လူတွေ သူများအပြစ်ပဲထိုင်ပြော ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်တချို့ ကိုယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေလုပ်ဖို့အမြဲကြိုးစားနေကြတယ် ” ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သူမ​ကြုံတွေ့ရတဲ့လူတွေရဲ့သဘောကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာပါ။ပရိသတ်တွေလည်း ချောရတနာပြောတာကိုထောက်ခံရင်မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ တရားက်စရာ လူ႕ေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ဖြင့္ေျပာလာတဲ့ ေခ်ာရတနာ”
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေခ်ာရတနာကေတာ့ ကာရာအိုေက ေခတ္ထဲက ေတးစီးရီးေတြမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္အေနနဲ႕ ပရိသတ္ေတြသတိထားမိလာၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာလည္း က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္သ႐ုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ မင္းသမီးတစ္လက္လို႔လည္း ဆိုရမွာပါ။ နာမည္နဲ႕လိုက္ေအာင္ ေခ်ာေမာလွပတဲ့မင္းသမီးတစ္လက္ျဖစ္ၿပီး တစ္သားေမြးတစ္ေသြးလွတယ္လို႔ဆိုရေလာက္ေအာင္ႏုပ်ိဳလွပေနတဲ့သူပါ။
ဇာတ္ေဆာင္ကာရိုက္တာေတြမွာသာမက ဇာတ္ပို႔ေနရာေတြမွာလည္း ပီပီျပင္ျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္တတတ္တဲ့သူမကေတာ့ ” ဥ ” ဇာတ္ကားမွာ စိတ္မႏွံ႕တဲ့ ဇာတ္ပို႔ေနရာကေန အကယ္ဒမီဆုကို ထိုက္ထိုက္ တန္တန္ ရရွိခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။လတ္တ ေလာမွာလည္းသူမအေနနဲ႕ Live sale ေလးေတြ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနတာပါ။
ဒီေန႕မွာေတာ့” တခ်ိဳ႕ လူေတြ သူမ်ားအျပစ္ပဲထိုင္ေျပာ ဖို႔လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္တခ်ိဳ႕ ကိုယ္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြလုပ္ဖို႔အၿမဲႀကိဳးစားေနၾကတယ္ ” ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႕သူမ​ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့လူေတြရဲ႕သေဘာကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပလာတာပါ။ပရိသတ္ေတြလည္း ေခ်ာရတနာေျပာတာကိုေထာက္ခံရင္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မိုင်ယာမီကမ်းခြေမှာ ချစ်သူလေးနဲ့ သာသာယာယာအနားယူနေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
သရုပ်ဆောင်နဲ့ မော်ဒယ်လ် ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ သူ့ရဲ့ LGBT ဖြစ်တည်မှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြထားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ပထမအိမ်ထောင် ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်မှာ သူ့ဘဝရွေးချယ်မှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အရိုးသားဆုံးထုတ်ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥက္ကာမင်းမောင်က လက်ရှိမှာလည်း ချစ်သူတစ်ယောက်ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ဘဝကို ချစ်သူနဲ့ အကောင်းဆုံး၊ အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြတ်သန်းနေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း ဥက္ကာမင်းမောင်က ချစ်သူနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး အလှပဆုံး မိုင်ယာမီကမ်းခြေကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥက္ကာမင်းမောင်က သူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကို မျှဝေပေးထားတာမို့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဥက္ကာမင်းမောင်ကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးဆိုတဲ့ အချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေတာ အားကျစရာပါပဲနော်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဥက္ကာမင်းမောင်တို့ စုံတွဲကိုကြည့်ပြီး အားကျနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
Source: Ye Htoo Win’s fb
သ႐ုပ္ေဆာင္နဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ ဥကၠာမင္းေမာင္ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ LGBT ျဖစ္တည္မႈနဲ႔ ပက္သတ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပထားခဲ့ၿပီး သူ႕ရဲ႕ ပထမအိမ္ေထာင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္မွာ သူ႕ဘဝေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ပက္သတ္ၿပီး အ႐ိုးသားဆုံးထုတ္ေျပာလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဥကၠာမင္းေမာင္က လက္႐ွိမွာလည္း ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ရ႐ွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ဘဝကို ခ်စ္သူနဲ႔ အေကာင္းဆုံး၊ အေပ်ာ္႐ႊင္ဆုံးျဖတ္သန္းေနသူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
လက္႐ွိမွာလည္း ဥကၠာမင္းေမာင္က ခ်စ္သူနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆုံး အလွပဆုံး မိုင္ယာမီကမ္းေျခကိုေရာက္႐ွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဥကၠာမင္းေမာင္က သူတို႔ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာ အမွတ္တရဓာတ္ပုံေတြကို မွ်ေဝေပးထားတာမို႔ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ဥကၠာမင္းေမာင္ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ခ်စ္သူနဲ႔ အေပ်ာ္႐ႊင္ဆုံးဆိုတဲ့ အခ်ိန္ေတြကိုျဖတ္သန္းေနတာ အားက်စရာပါပဲေနာ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ဥကၠာမင္းေမာင္တို႔ စုံတြဲကိုၾကည့္ၿပီး အားက်ေနေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။
“ပိုချစ်တဲ့သူ က ကိုယ်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် ပေးဆပ်တဲ့ အချစ်နဲ့ ချစ်သွားခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းသည် အကြောင်း လွမ်းဆွတ်သတိရပြီး ပြောလာတဲ့ ငွေတီဦး
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးရဲ့ညီမဖြစ်သူ ငွေတီဦးကတော့ ကျေးဇူးရှင်ဖေဖေကိုရော ချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်းသည်ကိုရော အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေတီဦးက (၁၀) နှစ်ကြာပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို သတိရတမ်းတနေလျက်ရှိပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ အမှတ်တရတွေကို အမြဲတမ်းရင်ဖွင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း ငွေတီဦးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာ တရားသဘောဆင်ခြင်ပြီး မိန်းမကိုလည်းအရမ်းချစ်ကြောင်း တဖွဖွပြောသွားတဲ့အကြောင်းကို ပြောလာပါတယ်။
“လွမ်းပီးခံစားကျန်ရစ်ခဲ့မှာကို မမြင်ရက်တော့လောက်အောင် သူ့ကိုအရင်ပေးသွားချင်မိခဲ့တဲ့ ကိုယ်က ပိုချစ်ခဲ့တာလား..?? ကိုယ်ဝေဒနာခံစားရမှာမဖြစ်စေချင်လို့ သူတစ်ယောက်ပဲ နာကြဉ်နေတဲ့ကြားက ကျေနပ်တယ် ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ သူက ပိုချစ်ခဲ့တာလား..??
တစ်ချို့သူတွေလဲ ကျွန်မလိုပဲ တွေးမိကြမှာပါ။ အရင်ထွက်သွားခွင့်ရတဲ့သူက ကိုယ်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုး..ကျွန်မလေ ကျန်ခဲ့ရမှာကို သေမှာထက် သိပ်ကြောက်တာ.. အရင်သေသွားတာ ကိုယ်ပဲဖြစ်ခွင့်ရချင်တာ..ဒါပေမယ့် ဆေးရုံပတ်လမ်းမှာ လမ်းလျှောက်နေရင်း ရုတ်တရက် ခံစားချက်တစ်ခုဝင်လာတယ်..”
“ကျန်ခဲ့ရတဲ့ နာကြဉ်မှုကို သူ့ကို မခံစားစေချင်တော့ပဲ လွတ်မြောက်ငြိမ်းအေးသွားတာ သူဖြစ်လဲ ကောင်းတာပါပဲလေ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်..ကျန်ခဲ့ရင် အစစအရာရာ အဆင်မပြေမှာ စိုးတဲ့အထိ စိတ်မချတဲ့ ခံစားချက်..
ချန်ထားရစ်ခံရမယ့်နေရာကို ရင်နာနာနဲ့ ကြည်ဖြူစွာ ခံယူလိုက်ချင်တဲ့ ခံစားချက်..ကိုယ်သိပ်ကြောက်တဲ့ ကျန်ခဲ့ရမယ့် ဝေဒနာကို သူမခံစားရပါစေနဲ့ ဆိုတဲ့စိတ်က ရုတ်တရက် ဝင်လာတာ..
အတ္တကိုခွာချမှ မြင်ရမယ့် မေတ္တာနဲ့ နွယ်တဲ့ အချစ်မျိုးကို ရုတ်တရက်ခံစားခဲ့ရတယ်.. နာကြဉ်မှုတွေကနေ သူလွတ်မြောက်သွားပါစေ..ဒီ့ထက် ပိုအေးချမ်းမယ့်ဘဝမှာ ပိုပီးကျန်းမာသန်စွမ်းမယ့် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အသစ်တဖန် ပြန်စနိုင်ပါစေ..ကိုယ့်ထက်ပိုချစ်နိုင်မယ့်သူနဲ့ ဆုံပါစေ..”
“ပိုချစ်တဲ့သူ ကိုယ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာ မှားသွားမှန်း အရာရာနောက်ကျပြီးမှ သိခဲ့ရတယ်။ “ကို က ပိုချစ်တာ” လို့ သူအမြဲပြောတုန်းက ကိုယ်က သိပ်မယုံခဲ့မိဘူး။
ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ အကြောင်း သိခဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် အမေပေါ့လေ.. “သူက သမီးကို ပိုချစ်တာ”တဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေက “ငွေတီရယ်..သူပိုချစ်တာ ငါတို့တောင် သိတယ်တဲ့” သူတို့ပြောမှ တဖြေးဖြေးလက်ခံလာတယ်။
နိုဝင်ဘာ ကို နှုတ်ဆက်ရတော့မယ်..ကိုရယ်.. အမှတ်ရစရာတွေ အရမ်းများတဲ့ နိုဝင်ဘာ.. ၁၁.၁၁.၁၁ မှာ လက်မှတ်ထိုးတယ်။ နိုဝင်ဘာမှာ Pre Wedding တွေ ရိုက်တယ်။
၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာမှာ Mediacorp နဲ့ Collaboration လုပ်ပီး ပွဲတွေ လုပ်တယ်။ ဒီနေ့..၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ မှာ အိမ်စဆောက်ဖို့ ပန္နက်တင်မြေသန့်မင်္ဂလာ လုပ်တယ်။ဒီနိုဝင်ဘာမှာပဲ ကိုက ထားခဲ့တယ်..”
“Anniversary မှီအောင်များ ဒီရောဂါဆိုးကို ၄ လလောက် တောင့်ခံနေခဲ့တာလား။ ဒေါသစိတ်နည်းပီး သီးခံစိတ်ရှည်တတ်တဲ့ ကို့အကျင့်ကြောင့် တခါမှ ကြီးကြီးမားမား ရန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးသလို ..
ချစ်က စိတ်ဆိုးလို့ စကားမာမာပြောမိရင်တောင် စိတ်မဆိုးဘဲ.. ညရောက်တာနဲ့ လက်မောင်းပေါ် ခေါင်းကို အတင်းဆွဲတင်ပီး ကျောကို ပုတ်သိပ်ခဲ့တာ။ အရာရာဟာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျေနပ်စရာ လွမ်းစရာတွေကြီးပဲ။
လူ့ဘဝကို ခနလာလည်တဲ့ ကို နဲ့ ဆုံခွင့်ရခဲ့တာ အချိန်အတိုင်းအတာအရ နည်းတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အကောင်းဆုံးဖြည့်စည်းပေးဆပ်ခွင့် ရခဲ့တာ အကောင်းဆုံးဆုလာဘ်ပဲ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဒဏ်ရာတွေမပေးခဲ့ကြတာ။
တစ်ယောက်လိုအပ်ချက်ကို တစ်ယောက် ဖြည့်စည်းပီး အပစ်အနာအဆာတွေကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြတာ။ ရခဲ့ဘူးတဲ့ ချိုမြိန်တဲ့အတိတ်ကို ရင်ထဲမှာမြှုပ်နှံပီး ရခဲ့သလောက်ကို ကျေနပ်ရောင့်ရဲတဲ့စိတ်ကို မွေးမြူပီး အတတ်နိုင်ဆုံး ဘဝကို ရှေ့ဆက်သွားမယ်နော်။ သတိရသေးရင် အိမ်မက်ထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့..” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
Source: Ngwe Ou’s fb
သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးရဲ႕ညီမျဖစ္သူ ေငြတီဦးကေတာ့ ေက်းဇူး႐ွင္ေဖေဖကိုေရာ ခ်စ္ရတဲ့ခင္ပြန္းသည္ကိုေရာ အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္းမွာ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေငြတီဦးက (၁၀) ႏွစ္ၾကာေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ခင္ပြန္းသည္ကို သတိရတမ္းတေနလ်က္႐ွိၿပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔ အမွတ္တရေတြကို အၿမဲတမ္းရင္ဖြင့္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာလည္း ေငြတီဦးက ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္ေတြမွာ တရားသေဘာဆင္ျခင္ၿပီး မိန္းမကိုလည္းအရမ္းခ်စ္ေၾကာင္း တဖြဖြေျပာသြားတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာလာပါတယ္။
“လြမ္းပီးခံစားက်န္ရစ္ခဲ့မွာကို မျမင္ရက္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ သူ႕ကိုအရင္ေပးသြားခ်င္မိခဲ့တဲ့ ကိုယ္က ပိုခ်စ္ခဲ့တာလား..?? ကိုယ္ေဝဒနာခံစားရမွာမျဖစ္ေစခ်င္လို႔ သူတစ္ေယာက္ပဲ နာၾကဥ္ေနတဲ့ၾကားက ေက်နပ္တယ္ ေပ်ာ္တယ္ဆိုတဲ့ သူက ပိုခ်စ္ခဲ့တာလား..??
တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြလဲ ကြၽန္မလိုပဲ ေတြးမိၾကမွာပါ။ အရင္ထြက္သြားခြင့္ရတဲ့သူက ကိုယ္ပဲျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး..ကြၽန္မေလ က်န္ခဲ့ရမွာကို ေသမွာထက္ သိပ္ေၾကာက္တာ.. အရင္ေသသြားတာ ကိုယ္ပဲျဖစ္ခြင့္ရခ်င္တာ..ဒါေပမယ့္ ေဆး႐ုံပတ္လမ္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း ႐ုတ္တရက္ ခံစားခ်က္တစ္ခုဝင္လာတယ္..”
“က်န္ခဲ့ရတဲ့ နာၾကဥ္မႈကို သူ႕ကို မခံစားေစခ်င္ေတာ့ပဲ လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းေအးသြားတာ သူျဖစ္လဲ ေကာင္းတာပါပဲေလ ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္..က်န္ခဲ့ရင္ အစစအရာရာ အဆင္မေျပမွာ စိုးတဲ့အထိ စိတ္မခ်တဲ့ ခံစားခ်က္..
ခ်န္ထားရစ္ခံရမယ့္ေနရာကို ရင္နာနာနဲ႔ ၾကည္ျဖဴစြာ ခံယူလိုက္ခ်င္တဲ့ ခံစားခ်က္..ကိုယ္သိပ္ေၾကာက္တဲ့ က်န္ခဲ့ရမယ့္ ေဝဒနာကို သူမခံစားရပါေစနဲ႔ ဆိုတဲ့စိတ္က ႐ုတ္တရက္ ဝင္လာတာ..
အတၱကိုခြာခ်မွ ျမင္ရမယ့္ ေမတၱာနဲ႔ ႏြယ္တဲ့ အခ်စ္မ်ိဳးကို ႐ုတ္တရက္ခံစားခဲ့ရတယ္.. နာၾကဥ္မႈေတြကေန သူလြတ္ေျမာက္သြားပါေစ..ဒီ့ထက္ ပိုေအးခ်မ္းမယ့္ဘဝမွာ ပိုပီးက်န္းမာသန္စြမ္းမယ့္ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အသစ္တဖန္ ျပန္စႏိုင္ပါေစ..ကိုယ့္ထက္ပိုခ်စ္ႏိုင္မယ့္သူနဲ႔ ဆုံပါေစ..”
“ပိုခ်စ္တဲ့သူ ကိုယ္ျဖစ္မယ္လို႔ထင္ခဲ့တာ မွားသြားမွန္း အရာရာေနာက္က်ၿပီးမွ သိခဲ့ရတယ္။ “ကို က ပိုခ်စ္တာ” လို႔ သူအၿမဲေျပာတုန္းက ကိုယ္က သိပ္မယုံခဲ့မိဘူး။
ကိုယ္နဲ႔သူနဲ႔ အေၾကာင္း သိခဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္ အေမေပါ့ေလ.. “သူက သမီးကို ပိုခ်စ္တာ”တဲ့။ သူငယ္ခ်င္းေတြက “ေငြတီရယ္..သူပိုခ်စ္တာ ငါတို႔ေတာင္ သိတယ္တဲ့” သူတို႔ေျပာမွ တေျဖးေျဖးလက္ခံလာတယ္။
ႏိုဝင္ဘာ ကို ႏႈတ္ဆက္ရေတာ့မယ္..ကိုရယ္.. အမွတ္ရစရာေတြ အရမ္းမ်ားတဲ့ ႏိုဝင္ဘာ.. ၁၁.၁၁.၁၁ မွာ လက္မွတ္ထိုးတယ္။ ႏိုဝင္ဘာမွာ Pre Wedding ေတြ ႐ိုက္တယ္။
၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာမွာ Mediacorp နဲ႔ Collaboration လုပ္ပီး ပြဲေတြ လုပ္တယ္။ ဒီေန႔..၂၉ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၆ မွာ အိမ္စေဆာက္ဖို႔ ပႏၷက္တင္ေျမသန္႔မဂၤလာ လုပ္တယ္။ဒီႏိုဝင္ဘာမွာပဲ ကိုက ထားခဲ့တယ္..”
“Anniversary မွီေအာင္မ်ား ဒီေရာဂါဆိုးကို ၄ လေလာက္ ေတာင့္ခံေနခဲ့တာလား။ ေဒါသစိတ္နည္းပီး သီးခံစိတ္႐ွည္တတ္တဲ့ ကို႔အက်င့္ေၾကာင့္ တခါမွ ႀကီးႀကီးမားမား ရန္မျဖစ္ခဲ့ဘူးသလို ..
ခ်စ္က စိတ္ဆိုးလို႔ စကားမာမာေျပာမိရင္ေတာင္ စိတ္မဆိုးဘဲ ညေရာက္တာနဲ႔ လက္ေမာင္းေပၚ ေခါင္းကို အတင္းဆြဲတင္ပီး ေက်ာကို ပုတ္သိပ္ခဲ့တာ။ အရာရာဟာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ေက်နပ္စရာ လြမ္းစရာေတြႀကီးပဲ။
လူ႕ဘဝကို ခနလာလည္တဲ့ ကို နဲ႔ ဆုံခြင့္ရခဲ့တာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအရ နည္းတယ္ဆိုေပမယ့္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အေကာင္းဆုံးျဖည့္စည္းေပးဆပ္ခြင့္ ရခဲ့တာ အေကာင္းဆုံးဆုလာဘ္ပဲ။ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာေတြမေပးခဲ့ၾကတာ။
တစ္ေယာက္လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ေယာက္ ျဖည့္စည္းပီး အပစ္အနာအဆာေတြကို ခြင့္လႊတ္ခဲ့ၾကတာ။ ရခဲ့ဘူးတဲ့ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့အတိတ္ကို ရင္ထဲမွာျမႇဳပ္ႏွံပီး ရခဲ့သေလာက္ကို ေက်နပ္ေရာင့္ရဲတဲ့စိတ္ကို ေမြးျမဴပီး အတတ္ႏိုင္ဆုံး ဘဝကို ေ႐ွ႕ဆက္သြားမယ္ေနာ္။ သတိရေသးရင္ အိမ္မက္ထဲမွာ ဆုံၾကတာေပါ့” ဆိုၿပီး ေျပာလာပါတယ္။
ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးရဲ့ မွေးနေ့လေး
ထိမိပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် အပြုံးချိုချိုတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်ရင်ထဲနေရာယူထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ မြန်မာစာလုံးပေါင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပညာပေးရိုက်ကူးထားတဲ့
မြန်မာစာ မြန်မာစကား ရုပ်သံအစီအစဉ် မှာ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအနေနဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို စတင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ လက်ရှိမြန်မာ့အရေးတွင် ပြည်သူနှင့်တသားတည်း အမှန်တရားဘက်မှ ပါဝင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအချိုကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်အတွက်၊ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့ကနေ မတရားတာကို အမှန်အတိုင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်ခဲ့လို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုကိုခံထားရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်
ပြေတီဦးကို (၃၀.၁၁.၁၉၇၈) မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့ဟာတော့ သူ့ရဲ့ (၄၂)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့လည်း ပြေတီဦးတိုဇနီးမောင်နှံကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖိုမျှော်လင့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လပိုင်းကတော့ စကစဟာ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အနုပညာရှင်အချိုကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမယ့် ပြေတီဦးမပါခဲ့ပါဘူးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အတွက် ဖခင်ဖြစ်သူဆုံးတာရော ယောက်ဖဖြစ်သူဆုံးတာကိုပါ မြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး
ကိုပြေတီဦး တစ်ယောက် မွေးနေ့မှစနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ မိသားစုနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ အဖြစ်မှကင်းဝေးပြီး ဘေးရန်ကင်းရှင်းပါစေ။ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးရှေ့အမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်ပါစေလိုဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးကရောသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ အများသူငါလို ကိတ်မုန့်တွေခွဲ၊ မိသားစုနဲ့စားသောက်ပျော်ပါးခွင့်မပြောနဲ့ ဘုရားသွားကျောင်းတက်တောင် လုပ်ခွင့်မရရှာတဲ့ ပြေတီဉီးကို ပရိသတ်တွေကရော ဘယ်လိုဆုတွေများ တောင်းပေးခဲ့ချင်ပါသလဲ။
ထိမိပီျပင္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေတြေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ရင္ထဲေနရာယူထားတဲ့ အႏုပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။သူဟာ ျမန္မာစာလုံးေပါင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေပး႐ိုက္ကူးထားတဲ့
ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ မွာ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လႈပ္႐ွားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ လက္႐ွိျမန္မာ့အေရးတြင္ ျပည္သူႏွင့္တသားတည္း အမွန္တရားဘက္မွ ပါဝင္ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈအခ်ိဳေၾကာင့္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းျပည္အတြက္၊ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ေ႐ွ႕ကေန မတရားတာကို အမွန္အတိုင္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့တြန္းလွန္ခဲ့လို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကိုခံထားရတဲ့ ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာ႐ွင္ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္
ေျပတီဦးကို (၃၀.၁၁.၁၉၇၈) မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီကေန႔ဟာေတာ့ သူ႕ရဲ႕ (၄၂)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ေျပတီဦးတိုဇနီးေမာင္ႏွံကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ဖိုေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဇြန္လပိုင္းကေတာ့ စကစဟာ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ အႏုပညာ႐ွင္အခ်ိဳကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါေသးတယ္ဒါေပမယ့္ ေျပတီဦးမပါခဲ့ပါဘူးဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့အတြက္ ဖခင္ျဖစ္သူဆုံးတာေရာ ေယာက္ဖျဖစ္သူဆုံးတာကိုပါ ျမင္ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ပါဘူး
ကိုေျပတီဦး တစ္ေယာက္ ေမြးေန႔မွစေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိသားစုနဲ႔ခြဲခြာရတဲ့ အျဖစ္မွကင္းေဝးၿပီး ေဘးရန္ကင္း႐ွင္းပါေစ။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ပရိတ္သတ္ေတြအားလုံးေ႐ွ႕အျမန္ဆုံးျပန္လာႏိုင္ပါေစလိုဆုေတာင္းလိုက္ရပါတယ္။
ပရိတ္သတ္ႀကီးကေရာသူ႕ရဲ႕ေမြးေန႔မွာ အမ်ားသူငါလို ကိတ္မုန္႔ေတြခြဲ၊ မိသားစုနဲ႔စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးခြင့္မေျပာနဲ႔ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ေတာင္ လုပ္ခြင့္မရ႐ွာတဲ့ ေျပတီဉီးကို ပရိသတ္ေတြကေရာ ဘယ္လိုဆုေတြမ်ား ေတာင္းေပးခဲ့ခ်င္ပါသလဲ။
စွဲမက်ဖွယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေနဲ့ ညှို့ယူ ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ မေရတီဇော်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များ
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ် မေရတီဇော်ကိုသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူမ ရဲ့အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်းဆွဲဆောင် နိုင်သူလေး လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်နဲ့ အင်တာဗျူးများစွာကိုလည်း လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင်အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။လတ်တလော မှာတော့ သူမ ရဲ့အမိုက်စား အလှတရား တွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစားထားတဲ့ Gym ဆောတဲ့ ပုံတွေကိုအများဆုံးတင်အလန်းစား ပုံလေးကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးဟာကြည့်ရှုသူတွေများပြားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေအများဆုံးဝန်းရံခြင်းခံနေရတာ လည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ပုံလေးထဲမှာမေရတီဇော် တစ်ယောက် Gym ဆော့ နေတဲ့ ပုံတွေကို တင်လာပေးတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ အမိုက်စားဖြစ်လွန်းနေတဲ့ ပုံတွေ တင်ပေးရင်း နေပြီးသူမ ရဲ့ ” ရာသီဥတုက boring ဖြစ်စရာကောင်းနေပေမဲ့ အလှ ပျက်မှာစိုးလို့ကိုယ်ကတော့ ပျင်းလို့မဖြစ် ပါဝူးလေ ” caption လေးနဲ့ ပရိသတ် ကြီး အတွက် တင်ပေး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အလှ က တော့မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင် ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါ တယ် ။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း မေရတီဇော် ရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးကိုကြည့်ရှု နိုင်စေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Source & Photo Credit :May Yati Zaw’s Facebook Account
စြဲမက္ဖြယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွေတြနဲ႕ ညွို႔ယူ ဖမ္းစားလိုက္ျပန္တဲ့ ေမရတီေဇာ္ရဲ႕ အမိုက္စား ပုံရိပ္မ်ား
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ တက္သစ္စ ေမာ္ဒယ္ ေမရတီေဇာ္ကိုသိၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္။ဆြဲမက္ဖြယ္ရင္သပ္ရႈေမာစရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႕ ပုရိသ ေတြရဲ႕ ရင္ကို ဆြဲေဆာင္ညို႔ယူထားတဲ့ အလန္းစား ေမာ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလး ျဖစ္ပါတယ္။
သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ နဲ႕ အတူ လွပ ၾကည္လင္တဲ့ အသား အေရ ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး သူမ ရဲ႕ အမိုက္စား ပုံေတြနဲ႕ ညို႔အားျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူေလး လည္း ျဖစ္ပါ တယ္။
သူမ ရဲ႕ အမိုက္စား ပုံရိပ္နဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ားစြာကိုလည္း လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ရွိတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။လတ္တေလာ မွာေတာ့ သူမ ရဲ႕အမိုက္စား အလွတရား ေတြနဲ႕ ညို႔ယူ ဖမ္းစားထားတဲ့ Gym ေဆာတဲ့ ပုံေတြကိုအမ်ားဆုံးတင္အလန္းစား ပုံေလးကိုေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ပုံေလးဟာၾကည့္ရႈသူေတြမ်ားျပားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ပုရိသေတြအမ်ားဆုံးဝန္းရံျခင္းခံေနရတာ လည္းျဖစ္ပါ တယ္။
ပုံေလးထဲမွာေမရတီေဇာ္ တစ္ေယာက္ Gym ေဆာ့ ေနတဲ့ ပုံေတြကို တင္လာေပးတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိနဲ႕ အမိုက္စားျဖစ္လြန္းေနတဲ့ ပုံေတြ တင္ေပးရင္း ေနၿပီးသူမ ရဲ႕ ” ရာသီဥတုက boring ျဖစ္စရာေကာင္းေနေပမဲ့ အလွ ပ်က္မွာစိုးလို႔ကိုယ္ကေတာ့ ပ်င္းလို႔မျဖစ္ ပါဝူးေလ ” caption ေလးနဲ႕ ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္ တင္ေပး ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမရဲ႕အမိုက္စားခႏၶာကိုယ္အလွ က ေတာ့ျမင္သူတိုင္း ေငးေလာက္ေအာင္ ကို ညို႔ယူဖမ္းစားေနတာအမွန္ပဲျဖစ္ပါ တယ္ ။ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေမရတီေဇာ္ ရဲ႕ အမိုက္စားပုံေလးကိုၾကည့္ရႈ နိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ဘလွန်းဒီအော ဆု ကို ၇ ကြိမ်မြောက်ရရှိပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်ထပ်မံတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ လီယွန်နယ်မက်ဆီ
ဘလွန်းဒီအော ဆု ကို ၇ကြိမ်မြောက်ရရှိပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ လီယွန်နယ်မက်ဆီ
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူး လီယွန်နယ် မက်ဆီအနေနဲ့ ပြင်သစ်ဘောလုံးအဖွဲ့က ချီးမြှင့်တဲ့ ဘယ်လွန်ဒေါဆုကို သူ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် ၇ ကြိမ်မြောက် အဖြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ တရားဝင်ရရှိသွားခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီအနေနဲ့ နိုင်ငံနဲ့ကလပ်အသင်းအတွက် ၅၆ ပွဲကစားခဲ့ရာမှာ ၄၁ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၇ ဂိုး ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် မိခင်နိုင်ငံ အာဂျင်တီးနားအသင်းကိုလည်း နှစ်တွေအကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုအဖြစ် ကိုပါအမေရိကဖလားကို ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက ယူပြနိုင်ခဲ့တာပါ။
ဘာစီလိုနာအသင်းမှာကစားခဲ့စဉ်မှာလည်း ကိုပါဒယ်ရေးဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ အသက်လက်တစ် ဘီလ်ဘာအိုအသင်းကို ၄-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ သွင်းဂိုး ၂ ဂိုးသွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေမှာ ၇ ကြိမ်တိုင်တိုင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် မက်ဆီအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲရဲ့ ရွှေဘောလုံးဆုနဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုတွေကိုပါ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့
၁၉၉၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံအသင်းကို ပထမဆုံး ဆုဖလားအောင်မြင်မှုကို ဘရာဇီးလ်အသင်းကို ဘရာဇီးလ်မြေမှာအနိုင်ယူပြီး ရရှိခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီ ကိုပါအမေရိကချန်ပီယံဆုအနေနဲ့ မက်ဆီရဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံအသင်းနဲ့အတူ ရရှိတဲ့ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုဖြစ်ပြီး သူ့ကို နောက်ထပ်တစ်ဦးချင်းထူးချွန်ဆုတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်အောင်လည်း တွန်းအားပေးစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသင်းသစ်ပီအက်စ်ဂျီအသင်းအတွက် ၉ ပွဲကစား၊ ၄ ဂိုးသွင်းထားတဲ့ မက်ဆီအနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်အတွင်း သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဘယ်လွန်ဒေါဆုကို
ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်မှာရှိတဲ့ ဒူရှတလက် ပြဇာတ်ရုံမှာ ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူး ဒီဒီယာ ဒရော့ဘာ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ရယူခဲ့ပါတယ်။
သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂါဘရီယဲလ် ဟနော့ထ်အနေနဲ့ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တုန်းက မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ ဘယ်လွန်ဒေါဆုကို သတင်းထောက်တွေ၊ နည်းပြတွေနဲ့ နိုင်ငံအသင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားကို ပေးအပ်နေကြ တစ်ဦးချင်းထူးချွန်ဆုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုပေးပွဲမစခင်ကတည်းက မက်ဆီက ဘယ်လွန်ဒေါဆုကို ရောဘတ် လီဗန်ဒေါ့ဗ်စကီး၊ ဂျော်ဂျင်ညိုနဲ့ ကာရင်မ် ဘန်ဇီးမားတို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရဖို့အတွက်
ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီဆုကို သူ့အနေနဲ့ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ နဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွေမှာလည်း ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရမှတ်အနေနဲ့တော့ မက်ဆီက ၆၁၃ မှတ်နဲ့ ပထမနေရာက ဘယ်လွန်ဒေါဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ဒုတိယနေရာက လီဗန်ဒေါ့ဗ်စကီးက ၅၈၀ မှတ်နဲ့ ဒုတိယ၊ ဂျော်ဂျင်ညိုက ၄၆၀ မှတ်နဲ့ တတိယ၊ ဘန်ဇီးမားက ၂၃၉ မှတ်နဲ့ စတုတ္ထ၊ အန်ဂိုလို ကွန်တေက ၁၈၆ မှတ်နဲ့ ပဉ္စမနေရာတို့က အသီးသီးရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လွန်ဒေါဆု ၅ ကြိမ်ရထားတဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ ၁၇၈ မှတ်နဲ့ ဆဌမနေရာက ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်၊ ဘာစီလိုနာမှာကစားခဲ့စဉ်က အသင်းဖော်လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ လက်ရှိ အသက်လက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူး လူးဝစ္စ ဆွာရက်ဇ်မှ
ဘယ်လွန်ဒေါဆုကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ပြုဖို့အတွက် အီဖယ်မျှော်စင်ကိုပါ မီးတွေအလှထွန်းထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းရဲ႕တိုက္စစ္မႉး လီယြန္နယ္ မက္ဆီအေနနဲ႔ ျပင္သစ္ေဘာလုံးအဖြဲ႕က ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ဘယ္လြန္ေဒါဆုကို သူ႕ကစားသမားဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ တရားဝင္ရ႐ွိသြားခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
မက္ဆီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ကလပ္အသင္းအတြက္ ၅၆ ပြဲကစားခဲ့ရာမွာ ၄၁ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၇ ဂိုး ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အျပင္ မိခင္ႏိုင္ငံ အာဂ်င္တီးနားအသင္းကိုလည္း ႏွစ္ေတြအၾကာႀကီးေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရတဲ့ ဆုဖလားေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ကိုပါအေမရိကဖလားကို ၿပီးခဲ့တဲ့ေႏြရာသီတုန္းက ယူျပႏိုင္ခဲ့တာပါ။
ဘာစီလိုနာအသင္းမွာကစားခဲ့စဥ္မွာလည္း ကိုပါဒယ္ေရးဖလား ဗိုလ္လုပြဲမွာ အသက္လက္တစ္ ဘီလ္ဘာအိုအသင္းကို ၄-၀ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ပြဲမွာ သြင္းဂိုး ၂ ဂိုးသြင္းယူေပးသြားႏိုင္ခဲ့ပါေသးတယ္။
ႏိုင္ငံလက္ေ႐ြးစင္အသင္းနဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲေတြမွာ ၇ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မက္ဆီအေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေ႐ႊေဘာလုံးဆုနဲ႔ ေ႐ႊဖိနပ္ဆုေတြကိုပါ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာဂ်င္တီးနားအသင္းေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံအသင္းကို ပထမဆုံး ဆုဖလားေအာင္ျမင္မႈကို ဘရာဇီးလ္အသင္းကို ဘရာဇီးလ္ေျမမွာအႏိုင္ယူၿပီး ရ႐ွိခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီ ကိုပါအေမရိကခ်န္ပီယံဆုအေနနဲ႔ မက္ဆီရဲ႕ ပထမဆုံးႏိုင္ငံအသင္းနဲ႔အတူ ရ႐ွိတဲ့ ဆုဖလားေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ၿပီး သူ႕ကို ေနာက္ထပ္တစ္ဦးခ်င္းထူးခြၽန္ဆုေတြ ဆြတ္ခူးႏိုင္ေအာင္လည္း တြန္းအားေပးေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အသင္းသစ္ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းအတြက္ ၉ ပြဲကစား၊ ၄ ဂိုးသြင္းထားတဲ့ မက္ဆီအေနနဲ႔ လက္႐ွိအခ်ိန္အတြင္း သူ႕ရဲ႕ေနာက္ဆုံးဘယ္လြန္ေဒါဆုကို
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ႐ွိတဲ့ ဒူ႐ွတလက္ ျပဇာတ္႐ုံမွာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းရဲ႕ဂႏၴဝင္တိုက္စစ္မႉး ဒီဒီယာ ဒေရာ့ဘာ က်င္းပတဲ့ အခမ္းအနားမွာ ရယူခဲ့ပါတယ္။
သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဂါဘရီယဲလ္ ဟေနာ့ထ္အေနနဲ႔ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တုန္းက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ ဘယ္လြန္ေဒါဆုကို သတင္းေထာက္ေတြ၊ နည္းျပေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံအသင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔အတူ ႏွစ္စဥ္ ကမ႓ာ့အေကာင္းဆုံးေဘာလုံးသမားကို ေပးအပ္ေနၾက တစ္ဦးခ်င္းထူးခြၽန္ဆုတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဆုေပးပြဲမစခင္ကတည္းက မက္ဆီက ဘယ္လြန္ေဒါဆုကို ေရာဘတ္ လီဗန္ေဒါ့ဗ္စကီး၊ ေဂ်ာ္ဂ်င္ညိဳနဲ႔ ကာရင္မ္ ဘန္ဇီးမားတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ရဖို႔အတြက္
ေရပန္းအစားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒီဆုကို သူ႕အေနနဲ႔ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ နဲ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေတြမွာလည္း ရ႐ွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ရမွတ္အေနနဲ႔ေတာ့ မက္ဆီက ၆၁၃ မွတ္နဲ႔ ပထမေနရာက ဘယ္လြန္ေဒါဆုကို ရ႐ွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယေနရာက လီဗန္ေဒါ့ဗ္စကီးက ၅၈၀ မွတ္နဲ႔ ဒုတိယ၊ ေဂ်ာ္ဂ်င္ညိဳက ၄၆၀ မွတ္နဲ႔ တတိယ၊ ဘန္ဇီးမားက ၂၃၉ မွတ္နဲ႔ စတုတၳ၊ အန္ဂိုလို ကြန္ေတက ၁၈၆ မွတ္နဲ႔ ပၪၥမေနရာတို႔က အသီးသီးရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။
ဘယ္လြန္ေဒါဆု ၅ ႀကိမ္ရထားတဲ့ ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုကေတာ့ ၁၇၈ မွတ္နဲ႔ ဆဌမေနရာက ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။
မက္ဆီအေနနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ အရင္းႏွီးဆုံးသူငယ္ခ်င္းလည္းျဖစ္၊ ဘာစီလိုနာမွာကစားခဲ့စဥ္က အသင္းေဖာ္လည္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ လက္႐ွိ အသက္လက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕တိုက္စစ္မႉး လူးဝစၥ ဆြာရက္ဇ္မွ
ဘယ္လြန္ေဒါဆုကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး သူ႕ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔အတြက္ အီဖယ္ေမွ်ာ္စင္ကိုပါ မီးေတြအလွထြန္းထားခဲ့တာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။
ကိုဗစ် မျိုးကွဲ အိုမီခရွန် က ကြောက်ဖို့ကောင်းလား၊ စိုးရိမ်စရာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေ
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ။ ကာကွယ်ဆေးကို ၂၄% လောက်ထိုးပီးသား။ အဲ့ဒီမှာ တစ်ပါတ်အတွင်း ရုတ်တရက် ကိုဗစ်လူနာတွေ များလာတယ်။ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းကနေ ကိုဗစ်လူနာတွေများလာတာမို့ကျန်းမာရေးဌာနက ထူးခြားမှုကို သတိထားမိတယ်။
ဒါနဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေရဲ့ ထူးခြားမှုရှိ/မရှိ ပြန်ကြည့်တော့ သူတို့လည်း ထူးခြားမှု( S gene drop out / failure) တွေ့တယ်။အဲ့တော့မှ သတိထားမိတယ် ။သူတို့တွေ့နေတဲ့ ကူးစက်မှုဟာ ကိုဗစ်မျိုးကွဲ ( variant) တစ်ခုပါလား။ဒီလောက်ကူးစက်နှုန်း မြန်တာ ဒါ့ကြောင့်ကိုး လို့ ကောက်ချက်ချကြတယ်။ WHO – ကို သတင်းပို့တယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ” စိုးရိမ်မျိုးကွဲ” ( variant of concern) သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ အချိန်ကာလ သုံးပါတ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်သွားတာ။ အဲတော့ ဒီကိုဗစ်မျိုးကွဲဟာ ” ကူးစက်နိုင်စွမ်း ပိုမြင့်” တဲ့ ပိုးဖြစ်ဖို့ အတော်များတယ် ( high probability of increased infectivity ) လို့ လတ်တလော ယူဆကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြောက်ကြတယ်။
(၂) ရောဂါပိုပြင်း မလား
ကိုဗစ်ရဲ့သဘာဝကို လူကြီးတွေ နဲ့ ရောဂါအခံရှိတဲ့သူတွေမှာ ပိုဆိုးတယ်လို့ သိထားကြတယ်။ Omicron ကတော့တမျိုး။ နှစ်ဆယ်ကျော် – သုံးဆယ်ဝန်းကျင်တွေမှာ “ပြင်းထန် လက္ခဏာ” တွေ တွေ့လာရတယ်။လူငယ် ၊လူလတ်ပိုင်းတွေ အထိ အခိုက်ပိုများတာ။
ရောဂါလက္ခဏာတွေကလည်း အဆင်ကွဲလာတယ်။ ခါတိုင်းလို အနံ့ပျောက်တာထက် ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲ မအီမသာဖြစ်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ (ဆိုရရင်တော့ – ရာသီတုပ်ကွေး ဆန်လာတယ်) တွေကပိုများတယ်။ Demographic and clinical changes တွေပေါ့။ ဒါကို သတိထားမိတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိခဲ့လို့လဲ အိုမီခရွန် အ ကြောင်း အချိန်မီ သတိထားမိလာကြတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြင်းလာသလားဆိုတော့ ” ပြောဖို့ စောသေးတယ်” လို့ဆိုကြတယ်။သို့ပေတဲ့ လူရွယ်တွေ အဖြစ်များတော့ အသည်းအသန်ကုသခန်းထဲ ကုသရခံနေကြတဲ့ (ICU patient) လူနာတွေက လူရွယ်တွေ ပိုများလာတာတော့ သေချာတယ်။ဒါ့ကြောင့် သတိကြီးကြီးနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြဖို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုကြတာပါ။
(၃) ကာကွယ်ဆေး က အဆင်ပြေရဲ့လား
လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ ဒီအိုမီခရွန် ပိုးတွေ့ လူနာတွေရဲ့ ၆၅% လောက်က ကာ ကွယ်ဆေး “မထိုးရသေး” သူတွေ လို့ဆိုပါတယ်။ လူငယ်၊လူလတ်တွေက ကာ ကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်မှာ နောက်ကျတာကို သတိပြုစရာပေါ့။
ကျန်တဲ့လူတွေမှာတော့ ကာကွယ်ဆေး “တစ်ကြိမ်ထိုး” တွေများပါသတဲ့။ ကာ ကွယ်ဆေး “နှစ်ကြိမ်ပြည့်” တွေမှာလည်း အနည်းအကျဉ်းတော့ “ဖြစ်ကြ” တာရှိပါသတဲ့။ဆိုရရင်တော့ ကာကွယ်ဆေးသည်အပြည့်အဝကာကွယ်မှု မပေးနိုင်သော်လည်း “အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ” ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိနေဆဲ လို့ ယူဆဖို့ပါ။
ဒါ့ကြောင့် “ကာကွယ်ဆေး” ကို အမြန်ဆုံး ၊ မဖြစ်မနေ lထိုးကြဖို့သာရှိပါတယ်။ ကာ ကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီများကတော့ ဒီမျိုးကွဲကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်မယ့် “ဒီဇိုင်းအသစ်” ကာကွယ်ဆေးမျိုး ထုတ်လုပ်ဖို့က သိပ်မခဲယဉ်းဘူးလို့ ဆိုနေကြလေရဲ့။
(၄) အရင်းခံက ဘာလဲ
တရုတ်မှာ စ,ဖြစ်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေ အလူးအလဲခံရတယ်။ အယ်လဖာ၊ ဘီတာ .. စသဖြင့်ပေါ့ ။ နောက်တော့ ဒယ်လ်တာ မှာ အိန္ဒိယ နဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေ အလဲအကွဲ။ ခု Omicron ကျတော့ အာဖရိကမှာ စတွေ့တယ်။ HIV နဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိသယောင် ပြောကြတဲ့ပညာရှင်တွေလဲ ရှိတယ်။
စံနစ်တကျ ဆေးကုသမှု မခံရတဲ့ အိပ်ချ်အိုင်ဗီ ရောဂါသည်တွေမှာ ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါဒီလိုထူးခြားတဲ့မျိုးဗီဇ အ ပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ် လို့ဆိုကြတာပေါ့။ အာဖရိက ရဲ့ ရေခံမြေခံမှာ “စိုးရိမ်မျိုး ကွဲ” ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကာ ကွယ်ဆေး လွှမ်းခြုံမှုကနည်း ၊လူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုက မပြည့်စုံ ၊ ခုခံကျရောဂါသည်တွေများတဲ့ ဒေသမှာ ကိုဗစ် တစ်ကြော့ပြန်လာခဲ့တာပါ။
တကမ္ဘာလုံးက အလန့်တကြား တုန့်ပြန်ကြပါတယ်။ ပိတ်ကြဆို့ကြပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ ဒီပိုးအကြောင်းအပြည့်အစုံသိရဖို့ နောက်နှစ်ပါတ်လောက် စောင့်ကြည့် ကြရပါဦးမယ် – အခုတော့ သတိကြီးကြီးထား ကြဖို့ဆိုပါတယ်။
ကျနော်တို့ကတော့ – mask တပ်၊ လက် ဆေး ၊ ခပ်ခွါခွါနေ၊ လူစုလူဝေးရှောင်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုး။ ပြောပဲပြောနိုင်တဲ့သူ မို့ ပြောရုံသာ တတ်နိုင်ပါကြောင်း ။
© 2022 ShwengweGames • Built with GeneratePress